वसन्तको लागि सर्ट्सको साथ शैलीहरू | बेजिया
वसन्तको लागि शर्ट्सको साथ शैलीहरू
मारिया vazquez | 20/06/2022 18:00 | मैले के लगाउने?
तपाईं पक्का हुनुहुन्छ कि तपाईं मध्ये धेरैको लागि गर्मीको लहरले तपाईंलाई आफ्नो शर्ट्स कोठरीबाट बाहिर निकाल्यो। र यो यो हो कि यो गर्मीको कपडा पहिले नै हाम्रो पोशाक पूरा गर्न को लागी एक वास्तविक विकल्प हो, यद्यपि हामीले अझै मौसम परिवर्तन गरेका छैनौं। के तपाईलाई सिर्जना गर्न विचार चाहिन्छ बर्मुडा शर्टका साथ आउटफिटहरू वसन्तको लागि?
बर्मुडा शर्टहरू धेरै फरक शैलीहरूमा अनुकूलित गर्न सकिन्छ। तिनीहरूको घुँडा लम्बाइ तिनीहरूलाई सर्टहरू भन्दा निश्चित परिस्थितिहरूमा थप उपयुक्त विकल्प बनाउँछ। उच्च तापमानको सामना गर्न छोटो र ताजा कपडा हुन बन्द नगरी।
तपाईं काममा जानको लागि, आफ्नो फुर्सदको दिउँसोको आनन्द लिन वा तपाईंको अर्को छुट्टीमा घुम्न जानको लागि सर्टहरूका साथ पोशाकहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ। बर्मुडा शर्ट्स हो धेरै बहुमुखी कपडा जुन तपाईले विभिन्न डिजाइन र रङहरूसँग पनि फेला पार्न सक्नुहुन्छ, तटस्थ रंगहरूमा सबैभन्दा लोकप्रिय भएका कारण।
मैले शर्टहरू कसरी जोड्ने?
के तपाइँ सर्ट्स संग एक नजर खोज्दै हुनुहुन्छ कि छ काममा जानका लागि उपयुक्त? कम्मरमा चिन्ह लगाउने बेल्टसहितको टप र ओभरसर्ट यसका लागि उत्कृष्ट सहयोगी बन्छन्। त्यसोभए, तपाईंले मात्र सही सामानहरू, मध्यम-हिलको स्यान्डल र एक पसल, उदाहरणका लागि छनौट गर्नुपर्छ।
विचार गर्न अर्को विकल्प हो शर्ट्स संग सूट तिनीहरू सबै लगाउन सजिलो छैन तर तिनीहरूले आफ्नो लुगाहरू सँगै र अलग रूपमा प्रयोग गर्न सक्षम भएर तपाईंलाई धेरै खेल दिन सक्छन्। उज्यालो रंगहरूमा सूटहरूमा यो गर्मी शर्त, तिनीहरू एक प्रवृत्ति हो!
यदि हामी अनौपचारिक र लापरवाह शर्टहरूका साथ पोशाकहरू सिर्जना गर्न चाहन्छौं भने प्रस्तावहरू गुणा हुन्छन्। यस गर्मीमा क्रप टप र शर्टको साथ सर्टहरू संयोजन गर्ने सबैभन्दा हालको हुनेछ। न त तपाईं आफ्नो सर्टहरूaसँग संयोजन गर्न गलत हुनुहुनेछ कपासको शर्ट यसको विपरितमा। रिब्डहरू, उदाहरणका लागि, एक क्लासिक हो जुन प्रयोगमा पर्दैन।
तपाईं सर्टहरूबाट हुनुहुन्छ वा तपाईं सधैं सर्टहरूमा शर्त गर्नुहुन्छ?
छविहरू - @fannyekstrand, ouanoukyve, @forvervanny, @thestylertalkercom,
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » फेसन » मैले के लगाउने? » वसन्तको लागि शर्ट्सको साथ शैलीहरू
शोकेससहितको भान्सा: तपाईंको क्रोकरी दृश्यमा
मैनीक्योर सेट - प्रत्येक चीज के हो?